Ngathi-Umzi mveliso wezoBugcisa oLungileyo weHebei
Ifektri yoBugcisa boBugcisa. ngumvelisi okhethekileyo kunye nomrhwebi wemabhile yobhedu kunye neentsimbi ezilahliweyo ezineminyaka emalunga nama-30 yamava. Inkampani yethu ibekwe e Shijiazhuang komzi, kwiphondo Hebei of China.
Owona msebenzi wethu uphambili kuzo zonke iintlobo zamatye kunye neemveliso zobhedu ezibandakanya amanani asempuma nasentshona, izilwanyana, imifanekiso eqingqiweyo, umfanekiso oqingqiweyo, iimbiza zeentyatyambo, iikholamu, imithombo, i-gazeboes, indawo yomlilo kunye nezipho ezincinci. Iimveliso zesinyithi zibandakanya i-gazebo, ucingo lwesango, kunye nesibane. Siyavuya ukuthatha ii-odolo ngokweesampulu okanye imizobo evela kuwe.
Sisoloko sinyanzelisa kumgaqo wokuxhamla kunye nokuphuhlisa kunye. Zonke iimveliso zethu zithengisa kakuhle kwihlabathi liphela, kubandakanya iYurophu, iMelika, iAsia, iAustralia kunye noMzantsi Afrika, ngaphezulu kwamazwe angama-30 kunye nemimandla.
Sinqwenela ukusebenzisana nabathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngesiseko sokuxhamla. Singathanda ukukunika iimveliso ezonelisayo kunye nenkonzo yethu ekumgangatho ophezulu.
Inkampani yobuGcisa bobuGcisa i-Hebei ibekwe kwiQuyang County, kwiPhondo lase-Hebei, eyaziwa ngokuba yi "dolophu yemifanekiso yase China"
Umzi mveliso wasekwa ngo-1985. Ukuza kuthi ga ngoku, sineminyaka engama-35 yokuvelisa kunye namava okuthengisa.
Ukusuka kumasifundisane wosapho wokuqala ukuya kumzi-mveliso wokuphucula. Sinombulelo omkhulu kubakhenkethi abatsha nabadala ngenkxaso noncedo lwabo.
Umzi mveliso wethu ngoku unemveliso egqibeleleyo kunye nenkqubo yokuthengisa.
Isebe loyilo, isebe lokwenza imodeli. Isebe lokukhetha izinto ezibonakalayo. Icandelo lemveliso. Isebe wokucoca. Isebe lokwamkela. Kwaye isebe lokugqibela lokupakisha.
Isebe ngalinye linenkokeli yeqela elingaphezulu kweminyaka eli-15 yamava omsebenzi. Zonke iinkqubo zokuvelisa zifuneka ngokungqongqo. Ngale ndlela kuphela sinokuqinisekisa ukuba abathengi baya kufumana iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
Kule minyaka yangoku. Ukuze wandise ishishini langaphandle. Okwangoku, siye saseka ixesha elide kunye nentsebenziswano ezinzileyo kunye nabathengi abavela eFransi, eUnited States, eItali, eRashiya, eSwitzerland, Qatar, Saudi Arabia, South Korea kunye namanye amazwe. Kwaye abathengi bokuphela kwamanye amazwe bathenga nakwimveliso yethu kwaye bazise abahlobo, usapho, abamelwane kuthi.
Sifumene iwonga eliphezulu lokukhetha izinto kunye nomsebenzi ogqwesileyo.
"Umgangatho yinkcubeko yethu" Wonke umsebenzi wobugcisa unebali lawo. Yonke imveliso esiyivelisayo ihlolwe kwaye iguqulwe amaxesha ngamaxesha. Ngalo lonke ixesha sifumana impendulo eyanelisayo kubathengi bethu. Sonwabile njengeendwendwe.
Ukuba ufuna iimveliso zethu. Unganqikazi ukuqhagamshelana nathi. Sisoloko sikukhonza. Injongo yethu kukuba "senze uthando lwehlabathi olwenziwe e-China"